Global Voices teny Malagasy » Rosia: Ustream.tv Voatafika Noho Ilay Bilaogera Rosiana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Mey 2012 9:25 GMT 1	 · Mpanoratra Andrey Tselikov Nandika Andriamifidisoa Zo
Ny marainan'ny 9 Mey 2012, nisy olo-tsy fantatra nanafika tamin'ny alalan'ny DDoS (Distributed Denial of Service ) ny vohikala mpikarakara mivantana Ustream.tv . Araka ny nolazain'i Victoria Levy avy ao amin'ny Ustream.tv, avy amin'ny IPs an'arivony, miorina any Rosia, Kazakhstan ary Iran ny fanafihana. Nitodika tany amin'ny mpisera iray manokana [ny fanafihana] izay tsy iza fa i, reggamortis1  [ru], ilay nampita ny fivorian'ny mpanohitra sy ny hetsi-panoherana ao Moskoa.
Tsy azo nidirana nandritra ny ora maro taty aoriana ny reggamortis1 na dia efa nanomboka niverina ara-dalàna aza ny Ustream.tv rehefa tsy nety nandeha nandritra ny folo ora. Nilaza ny Filoha Tale Jeneraly Brad Hunstable nandritra ny tafatafa nifanaovana tamin'ny Global Voices fa ity no fanafihana DDoS henjana indrindra nihatra tamin'ny vohikala.
Pikantsarin'ny takelaka fandraisana Ustream.tv manasongadina ny tatitra nataon'i reggamortis1 nandritra ny hetsi-panoherana tao Moskoa.
Manamora sy manatsotra dia tsotra ny fandefasana mivantana amin'ny alalan'ny finday avo lenta [maharaka] ny Ustream.tv, ka mahatonga azy ho loharanom-pamoaham-baovao tsy hita pesipesenina ho an'ny bilaogera manerantany. Mahazo olona 55 tapitrisa isan-taona, ary eo ho eo amin'ny votoaty maharitra 125 ora isa-minitra eo no misy mampakatra. Iraky ny Ustream, hoy Atoa Hunstable, ny hanome sehatra ho an'ny olona hifampizarana tantara sy hananganana vondro-piaraha-monina.
Mifanaraka amin'izany iraka izany indrindra, nampiasa ny tolotra hitaterana ny hetsi-panoherana avy any am-potony, misolo ny toeran'ny televizionam-panjakana rosiana ilay olo-tsotra Rosiana tia mampita vaovao Kirill Mikhailov, na reggamortis1 , izay misioka ao amin'ny @reggaemortis1  [ru] ihany koa ary mibilaogy ao amin'ny reggae-mortis.livejournal.com  [ru].
Nahazo mpanaraka tamin'ny alalan'ny Twitter toy izany ihany koa tamin'ny 5 marsa ny fampitana mivantana nataon'ny mpisera vova-moskva  [ru]. Mampita ny zava-mitranga tao amin'ny kianjan'i Pushkinskaya tao Moskoa nandritra ny fihaonana nifanaovana hanoherana ny nifidianana indray an'i Vladimir Putin izany.
Mikhailov mibilaogy ny ilàna isian'ny tahaka izany  [ru] tamin'ny 29 Febroary:
Hilaintsika ny isian'ny tatitra tsy mijanona avy amin'ny kianja tsirairay ary afantoka amin'ny toerana iray izany. Saingy mbola indray andro any.
Tara ihany i Mikhailov tamin'io resaka io. Efa nandefa mivantana ny hetsika ihany ny Fantsona Ustream.tv an'i Ridus , sehatra Rosiana an'olo-tsotra tia mitati-baovao, hatramin'ny faran'ny volana desambra, ary efa nahazo mpijery mivantana nihoatra ny roa tapitrisa.
Mifanaraka tsara amin'ny fironana ankapobeny amin'ny fitateram-baovao amin'ny alalan'ny aterineto ao Rosia izany fomba fitateram-baovao “mioko” izany. Ohatra, manome sehatra itafatafan'ny mpitarika mpanohitra sy mizara azy ireo matetika ny tvrain.ru  [ru] izay televiziona an-tserasera manana fironana liberaly. Vao nanome sehatra  [ru] ho an'ilay ankafizin'ny mpanohitra Ksenia Sobchak  indray izy taorian'ny nandrarana ny adihevitra politika nataony tsy hahazo hivoaka ny televiziona mahazatra.
Etsy ankilan'ny sakanan-dalana [barricades], ny MinaevLive  [ru] dia mpandefa mivantana “seho an'aterineto” kirakirain'i Sergei Minaev, mpanoratra sy mpibilaogy Rosiana malaza ho manana fifandraisana amin'i Kremlin. Tatitra iray nahatratra ny faratampony tao amin'ny YouTube ny diaben'ny an-tapitrisa tamin'ny 6 mey milaza ny ora efatry ny fijerin'ny vorona momba ny ady sy ny fivoarany . (Hita ato  ny fanafainganana sy ny famatrarana azy ho efatra minitra ao amin'ny YouTube.)
Mifandrindra amin'ny fanafihana ny vohikala sy ny valan-tseraseran'ny Rosiana mpanohitra hafa ity fanafihana DDoS mahazo ny Ustream.tv ity. RuNet Echo moa efa nitatitra ny fisian'ny  fanafihana DDoS natao tamin'ny fampitam-baovaon'ny rosiana mpanohitra nanedritra ny fifidianana parlemantera rosiana notontosaina tamin'ny volana desambra teo. Efa tratran'ny DDoS ihany ny Ustream.tv an'i Ridus tamin'ny 6 Desambra sy 6 Janoary.
Efa niverimberina matetika mandritra ny Diaben'ny an-tapitrisa ny fanafihana ny media an-tserasera. “Tsy mandeha ny tvrain.ru, ary toy izany ihany koa ny Slon [slon.ru] sy ny Echo Moskvy [echo.msk.ru],” hoy ny siokan'i @tvrain  [ru] tamin'ny 6 Mey.
Tamin'io andro io ihany koa ny tale jeneralin'ny Kommersant, Demian Kudriavtsev, no nanaitra tao amin'ny Facebook -ny [ru] fa tratran'ny fanafihana DDoS ny vohikalan'ny gazety mivoaka isan'andro. Manome ny antony mitovy amin'izany ihany koa  [ru] ny ako nataon'i Varfolomeev noho ny fihetsiky ny tranonkalany.
Angamba noho izany toe-javatra izany no nahatonga an'i Mikhailov, mpikatroka mpanohitra avy amin'ny Ufa  [ru] izay milaza ny tenany ho “Hamster mpiadin'i Navalny” no tsy mametraka ny atody reehtra ho anaty harona iray. Na dia nampîasa ny Ustream.tv aza izy hatramin'ny15 Avrily  [ru], nivadika kaonty Bambuser.com  kosa izy nandritra ny fanafihana ny fantsom-baovaony tamin'ny 9 mey (mitovitovy fiasa ihany ny Bambuser sy ny Ustream) hanohizany ny fitantarany. Ao amin'ny bolongany ihany koa izy no manome ny lisitr'ireo miasa miaraka aminy, romanpomych , izay nandeha rehefa tsy tafa ny an'i Mikhailov.
Talohan'ny nanaovany ity tetikasa ity i Mikhailov dia efa nitatitra ny fitokonana tsy hihinan-kanina nataon'i Astrakhan (fampitam-baovaon'i Global Voices hitanao ato  sy ato ), izay andraisany anjara ho anisan'ny mitokona tsy hisakafo. Tsy mampino fa mitokona tsy hihinankanina  [ru] indray izy amin'izao fotoana izao, na dia mihazakazaka manerana an'i Moskoa mampita vaovao aza. Ao anatin'izany raharahany rehetra izany, mbola mahita fotoana hanoratana mailaka any amin'ny Ustream.tv ihany i Mikhailov hiampangany ny fitondrana rosiana sy ny tanoran'ny vondrona Nashi ho tompon'andraikitra tamin'ny fanafihana:
[…] Ankasitrahana ny vohikalanareo fa arahina akaiky ny zavamisy eto Rosia amin'izao fotoana izao. Ity ihany no loharanom-pifandraisana tokana, misaotra amin'ny hahitanay ny famonoan'i Putin ny olom-pirenenay. […] Tsy mandeha ny tranonkalanareo noho ireo tsy vanona ireo – kremlin.ru and nashi.su. Ireo olona ireo, eo ambany fibaikoan'i Putin, no mandroba ny vaovao ho an'ny olona sy manafina izay mitranga ao an-drenivohitr'i Rosia ka mitondra ny fanafihana amin'ny alalan'ny DDoS ny ustream.tv.
Hitan'i Brad Hunstable ho nanelingelina tokoa ny fanafihana. Aminy, misy mitady hanaisotra ny zon'olo-pirenena manerantany hiteny sy hohenoina, izany hoe manao izay hanodinana ny iraka ampanaovina ny orinasa. Mbola miady hevitra amin'ny fomba hamaliana tsara indrindra ny toe-draharaha moa amin'izao fotoana izao ny Ustream.tv. Mandritra izany ary ho toy ny fihaikana avy amin-dry zareo, nampiany fahafaha-misafidy ny teny Rosiana  ao amin'ny vohikala:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/05/12/33146/
 mibilaogy ny ilàna isian'ny tahaka izany: http://reggae-mortis.livejournal.com/2012/02/29/
 Fantsona Ustream.tv an'i Ridus: http://www.ustream.tv/ridus
 nanome sehatra: https://mg.globalvoices.orgria.ru/society/20120207/559313572.html
 ora efatry ny fijerin'ny vorona momba ny ady sy ny fivoarany: http://www.youtube.com/watch?v=g4Xbd8owKaM
 efa nitatitra ny fisian'ny: https://globalvoicesonline.org/2011/12/05/russia-election-day-ddos-alypse/
 hoy ny siokan'i @tvrain: http://twitter.com/#!/tvrain/status/199082834806308866
 no nanaitra tao amin'ny Facebook: https://www.facebook.com/Damiankudriavtsev/posts/10150825898769361
 Manome ny antony mitovy amin'izany ihany koa: http://twitter.com/#!/Varfolomeev/status/199079142493401091
 avy amin'ny Ufa: http://reggae-mortis.livejournal.com/2012/03/18/
 izy hatramin'ny15 Avrily: http://reggae-mortis.livejournal.com/14241.html
 nivadika kaonty Bambuser.com: http://bambuser.com/channel/reggaemortis
 mitokona tsy hihinankanina: http://reggae-mortis.livejournal.com/17720.html
 fahafaha-misafidy ny teny Rosiana: https://twitter.com/#!/Ustream/status/200312381048487937/photo/1